VAKY BANTSILANA : Mandroso amin’ny fihemorana… | NewsMada
VAKY BANTSILANA : Mandroso amin’ny fihemorana…
Vely kanonta ho an’ny vahoaka ny fiakaran’ny vidin-tsolika isaky ny fiandohan’ny volana izao. Fototra iray mampiakatra ny vidim-piainana eto amin’ny tany sy ny firenena anefa ny fiakaran’io isak’izay mihetsika. Ombalahy tapa-tandroka hatrany ny vahoaka malagasy ka very fanahy mbola velona. Tsy hita ny tena fandraisana andraikitry ny fanjakana mba hanalana ny fahasahiranam-bahoaka. Tratran’ny kely tsy mba mamindro amin’ny fidangan’ny vidim-piainana. Ny lehibe variana manadio tena amin’ny karazana dokambarotra momba ny tenany satria manakaiky ny fifidianana…
Anisan’ny mahavelom-panahiana ny vahoaka ny tsy fidinan’ny vidim-bary, izay tena fototr’ain-dRamalagasy. Marobe ny miaina amin’ny atsasaky ny fahefany amin’ny vidin’entana ilaina amin’ny andavanandro. Tsy vitsy ireo antoko nitondra soso-kevitra mahakasika azy io, saingy minia manao bemarenina ireo mpitantana. Efa mihatra amin’ny akalanain’ny vahoaka ny fahasahiranana mianjady. Mitombo an-dalana ireo tsy misakafo intelo isan’andro intsony amin’ny Malagasy. Izay voky anefa no maharaka ny namany. Tsy resahina intsony ny tsy fanjarian-tsakafo sy ireo ianjadian’ny kere any amin’ny faritra Atsimo…
Raha ny antontanisa navoakan’ny fitondram-panjakana omaly, tafiakatra hatrany amin’ny (+9,0%) ny fiakaran’ny vidim-bary, izay azo ambara fa tena nidangana dia nidangana tokoa taorian’ny haintany sy ny fandalovan’ny rivodoza Enawo farany teo ireny. Tsy tafaverina araka ny tokony ho izy intsony ny tena vidiny. Afo am-bilanikely ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana ka mahavery fanantenana amboniny ihany. Harefo saraky ny ony ny vahoaka, manoloana izany rehetra rehetra izany, na maitso aza milofika. Ny vary anefa, tsy fotsy tsy an-daona ary ny fampandrosoana tsy vita raha tsy tsikeraina.
Ambentin-tenin’ireo mpitondra ny fitiavan-tanindrazana sy ny filazana fa efa mipaka hatrany ifotony ny fampandrosoana. Kibo mitsara tena ny tsirairay amin’izay lazain’izy ireo fa tena fampandrosoana marina. Mandroso tokoa fa mandroso any amin’ny fihemorana…Antsibe vakimaso no ataon’izy ireo, na tsy hitan’ny olona aza, tsy maintsy hitan’ny hazo. Ho very sasaka tahaka ny tambavy gasy ny taom-piasan’ny mpitondra, saingy mandroso, fa mandroso midina tahaka ny rambon’omby ny fiainam-bahoaka. Iza no mbola hanantena amin’izao fitondrana efa manahy tena amin’ny tsy fikarakarana ny sosialim-bahoaka izao?